Izinsuku ze-Currie Cup zihlehlisiwe | Scrolla Izindaba
Izinsuku ze-Currie Cup zihlehlisiwe
Izinsuku zomdlalo owandulela owamanqamu nowokugcina we-Carling Currie Cup zihlehliswe yi-SA Rugby ukulwa nosongo lwesifo se-Covid-19.
Izinsuku zomdlalo owandulela owamanqamu nowokugcina zihlehliswe ngeviki elilodwa njengesinyathelo sokuqapha ukuvumela ababambiqhaza ukuthi bakwazi ukuphatha izinselelo ze-Covid-19.
Esitatimendeni esithunyelwe yi-SA Rugby, uMqondisi we-Rugby, uRassie Erusmas uthe: “Sivumile ukuhlehlisa izinsuku zomdlalo owandulela owamanqamu nowamanqamu ngeviki elilodwa ukuze sinikeze wonke amaqembu ithuba elihle lokuthi ayilungele imidlalo yawo.”
Ubonge abakuma-semi-final ngokubambisana kwabo ekuqinisekiseni ukuthi bayasibona isizathu sokuthi isizini kumele iphume kanjani.
I-Vodacom Bulls ishaye i-Xerox Lions ukuze ithole owandulela owamanqamu ekhaya ngokuqeda phezulu kwetafula le-Currie Cup. La maqembu womabili azohlangana ngoMgqibelo, mhla zingama-23 kuMasingana e-Loftus Versfeld Stadium ePitoli. Umdlalo uzoqala ngo-14h00.
I-DHL Western Province izosingatha i-Cell C Sharks kwi-semi final yesibili nayo ngomhla zingama-23 kuMasingana e-Newlands. Umdlalo uzoqala ngo-16h30.
Umdlalo wokugcina oyi-round-robin we-Currie Cup phakathi kwe-Western Province nama-Sharks ukhanselwe ngokuhambisana nezivumelwano ze-Covid-19 ngemuva kokuba kube nokuthelelana okuqinisekisiwe kwe-Covid ekhempini yama-Sharks.
Umdlalo wamanqamu, ozoba neqembu lasogwini nelezwe, uzodlalwa ngoMgqibelo, ngomhla zingama-30 kuMasingana.
Noma ngabe yini eyenzekayo, iNdebe izoba nompetha omusha njengoba ompetha abavikelayo, ama-Toyota Cheetahs engawatholanga ama-playoffs.